Easy Ways For Technology
blog for easy ways in technology
Posted by Lin Htaik at 10:03 PM 1 comment:
ငါရှေ့ မလျှောက်ပါနဲ့ .........နောက် ကနေငါမလိုက်နိုင်ဘူး..
ငါနောက်က မလျှောက်ပါနဲ့......ငါ မင်းကို ဦးဆောင် မသွားချင်ဘူး.
ငါဘေး က လျှောက်ပါ ...မင်း ဟာ ငါ့ ဘ၀ တစ်ခုလုံး ရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးပါ ကွာ...
Posted by Lin Htaik at 6:06 PM No comments:
ငါ သည် blogger မဖြစ်နိုင် ၊ စာရေးဆရာ မဖြစ်နိုင်..
ငါ သည် စာရေးတာ ၀ါသနာပါတယ်၊ပြီးတော့ သူများ ကို ဆရာကိုလုပ်ရတာ၊ နည်းနည်းလှအောင် ပြောရရင် share ရတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ စကားတွေ ဟာ အနှစ်မရှိတဲ့၊ ပညာရှိစကားတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ..
ဒီလို့ ဗျာ ကျွန်တော်က စာ ကိုဖတ်ခဲ့တဲ့ အခါမှာ အဲဒီစာ ရဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုအဓိက ထားမဖတ်ပဲ ဒီစာ ရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းက ဘာလဲ ဒီစာရေးတဲ့ အချိန် စာရေးဆရာ စိတ်ဓာက် ကဘာလဲ ၊ ပြီးတော့ ဒီထဲက ဇာက်ကောင်တွေ က ဘာတွေ တွေးနေတာ ဆိုတာ ကို အဓိကထား စဉ်းစားမိတယ်။..
ဥပမာပြောမယ်...ကျန်စစ်မင်းသား စောလူးမင်း သား ကိုသွားကယ် တဲ့ ခုနှစ်ကို မေး ကျွန်တော် မသိတော့ဘူး..ဒါပေမယ့် ခုထိ အမှတ်ရနေတာ တစ်ခု က စောလူးမင်း ဟာ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာတွေ တွေးမိလို့ ကျန်စစ်မင်းသား လာကယ်တာကို အော်လိုက်ရတာ လဲလို့ မှတ်မိနေတုန်းပဲဗျာ..
ကဲ မခက်ဘူးလား ဗျာ...
ကျွန်တော် က လူတွေ ရဲ့ စိတ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာဗျာ အဲဒီကြတော့ ဘယ်လို့ လုပ် blogger တစ်ယောက် ၊ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလဲခင်ဗျာ...
ဒါပေမယ့် သိတဲ့ အတိုင်း ဒီစာ ရေးနေတာကိုက လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိနေသေးတာ ကို ဖော်ပြနေတာပါဗျာ..
ကဲ အဲဒီတော့ စိတ်ကူးတယ် ကျွန်တော် စာဖတ်တဲ့လူတွေကို နည်းနည်းလောက် မေတ္တာ ရပ်ခံချင်တာ ကတော့ ကျွန်တော် ရေးတာတွေဟာ ပညာရှိစကား မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ..ပြီးတော့ ..ခုနှစ် အထောက်အထား ၊ ကျမ်းကိုး တွေလည်း တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး...ကျွန်တော်နေရာမှာ တွေ့ရမှာကတော့ ကျွန်တော် တွေးနေတဲ့ ဟာတွေပဲ တွေ့ရပါလ်ိမ့်လို့ ကြိုတင်မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။..
အားလုံး ကိုလည်း အဲဒီအတွက် နည်းလမ်း မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း တောင်းပန်ပါရစေ...ကျွန်တော်ကကို ညံခဲ့တဲ့ အတွက်ပါခင်ဗျာ...
Posted by Lin Htaik at 2:57 PM No comments:
ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ ...
ကျွန်တော် အတွက်ကတော့ ဒီလိုမျိုးနေ့တွေဟာ မမေ့သွားတက်ပါဘူး..
ဗိုလ်ချုပ် ဟာ ဒီလို့ မျိုး နေ့မှာ မြန်မာပြည် ရဲ့ တစ်နေရာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော် မေ့လို့ မရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဒီနေ့ ဟာ 13 ၇က်နေ့ ဖြစ်နေတာ ကြောင့်ပါ..
ကျွန်တော် က ဂဏန်းတွေကိုနည်းနည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ် .. ....ပြီးတော့4၊ 8 ၊ 13 ၊ 17 တို့ စတဲ့ ဂဏန်းတွေ ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဒီဂဏန်းရှင်တွေဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ တစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ပြီးအဲဒီအတွက် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင် လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတဲ့ သူတွေပါ..ပြီးတော့ ဒီဂဏန်းရှင်တွေ ဟာ မကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲကြပါတယ်...လုပ်ခဲ့ရင် လည်း သူတို့ ဟာ ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်အဆုံးအဖြတ်ပြန်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ ဓလေ့တွေရှိပါတယ်...
ပြီးတော့ အေ၇းကြီးဆုံးကတော့ သူတို့ ရဲ့အတွက် ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်နဲ့ ဘယ်တော့ မှ အလုပ် မလုပ်ချင်ကြဘူး၊ ငါ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ငါ့ နိုင်ငံ အတွက် ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ နဲ့ အသက်ရှင်ချင်ကြတဲ့ လူမျိုး တွေပါ...ကိုယ်အတ္တအတွက် လုပ်ရမှာကို ပဲ ရှက်တက်တဲ့ လူမျိုးတွေ ပါ...
ဒါပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ စိတ်ရင်း အမှန် ကို အခြား လူတွေ က သဘော တော်တော်နဲ့ မပေါက်နိုင်ကြဘူး ...အားလုံးပြီးမှ သူတို့ မရှိတော့မှ သူတို့ ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ ကို သဘော ပေါက်လေ့ ပေ့ါက်ထ ရှိတဲ့ ဂဏန်းရှင် တွေ ..ပါ...
အဲဒီ ဂဏန်းမျိုးပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကို ကျွန်တော် ချစ်တာ မမှားပါဘူး...သူမှာ အဓိက ကတော့ ရိုးသားတဲ့ ဂုဏ်၊ ကိုယ့်ဘ၀ အောင်မြင်ဖို့ မအောင်မြင်ဖို့ ကို အဓိက မထားဘူး ငါ့နိုင်ငံ အတွက် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ၊ ငါ ဘာလုပ် ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပဲ တစ်သက်လုံးနေသွားခဲ့တဲ့ ..ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစား မြတ်နိုးမိတာ မဆန်းပါဘူးဗျာ..
ပြီတော့ ဗိုလ်ချုပ် သူလုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးသွား ခဲ့ပါပြီ..
ကျွန်တော်တို့ လည်း ကိုယ်ရတဲ့ တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင်ဘယ်လို့ ထမ်းဆောင်ကြမလဲ...
ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့ အမှတ်တရ...
Posted by Lin Htaik at 8:34 PM No comments:
ဤနေ့သည် မြန်မာပြည်၏ပြည်တောင်စု ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့ အကြောင်းကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် ၏ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နိုင်ငံတော် လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ အတွက် ပြည်ပ ကို သွားပြီး တောင်းဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သိတဲ့ အတိုင်း မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓာက် အတိုင်း အဲဒါကို လက်မခံ နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး ပြည်နယ်တွေကနေ စာပို့ ကြတဲ့ အတွက် ဗိုလ်ချုပ် ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး...
ဒီနေ့လို့ မျိုးနေ့မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လက်ခံပါတယ် အကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်..(ပင်လုံ စာချုပ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ...12-2-1947 )
ဒီနေ့ ကို အဲဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်ထောင်စု နေ့ လို့ ခေါ်နေကြတာပါခင်ဗျာ...
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ရဲ့ တစ်စိတ်တစ် ၀မ်းထဲ ဖြစ်တဲ့ နေ့ ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေ့ါခင်ဗျာ...
ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာက် ..မြန်မာတိုင်းရင်း သားတွေရဲ့ စိတ်ဓာက်ကိုတော့ ဒီသမိုင်းကြောင်း နောက်ခံ က ပြောပြပေးနေပါတယ်...
မြန်မာပြည် ဟာ ဘာလို့ မတိုးတက်သေးတာလဲ ...
ဘာလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဟိုဟာ မှားတယ် ဒီဟာ မှားတယ် ပြောနေကြတာလဲ ....
စဉ်းစား စရာတွေ ပါ...
အင်တာနက် ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ..တစ်ဦး တစ်ယောက် တစ်နိုင်ငံတည်း စိတ်ဓာက်တွေ ဟာ သိပ် ပြီး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ လူသားတွေ လက်ခံနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို့မျိုးက ငါ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၊ ငါ အတွက် ၊ ငါလူမျိုး အတွက် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာက်တွေ ထားဖို့ သင့်ပါသေးသလား ....
ဒါမှ မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူသား တွေ အတွက် ...လူသားတွေ အားလုံး ပူးပေါင်းပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ ရမလဲ ဒီထက် ကောင်းတာ ဘာတွေ လုပ်လို့ ၇ပါအုန်းမလဲ ....
ပြည်တောင်စုနေ့ အမှတ်တရာ မှတ်တမ်းလေးနဲ့ စဉ်းစားမိတာပါခင်ဗျာ..
Posted by Lin Htaik at 6:37 PM No comments:
အင်တာနက်ပေါ်က တွေ့လို့ တင်လိုက်ကြည့်တာ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုန်း
Posted by Lin Htaik at 4:22 PM No comments:
ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက ...........အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်
ကြည့်လိုက်တဲ့ တစ်ချက်က ........ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပြည့်စုံသွားစေတယ်
ကြားရတဲ့ အသံချိုလေးက .......ဘ၀တစ်ခုလုံး အမောတွေကိုပြေစေတယ်.
အထီးကျန်မှုဟာ ...............ငါနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလို ခံစားမိတယ်
ဘ၀ကို အရင်ထက် ...........ကျေနပ်လာနိုင်တယ်
တစ်သက်လုံး အတူတူနေသွားတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ ပေါ်လာတယ်..
ဒီခံစားမှုတွေကို ခံစားစေနိုင်တဲ့ ....မင်းကိုချစ်တယ်
Posted by Lin Htaik at 7:24 PM No comments:
CMS MP3 Player...